မစ်ဆူဘီရှီအန်းဒရွိုက်ကား GPS စနစ်, မစ်ဆူဘီရှီအန်းဒရွိုက် 4.2 ကား DVD, တရုတ်ထံမှမစ်ဆူဘီရှီအန်းဒရွိုက် 5.1 ကား DVD ထုတ်လုပ်သူ
ဖေါ်ပြချက်:မစ်ဆူဘီရှီအန်းဒရွိုက်ကား DVD,မစ်ဆူဘီရှီအန်းဒရွိုက် 4.2 ကား DVD,မစ်ဆူဘီရှီအန်းဒရွိုက် 5.1 ကား DVD,မစ်ဆူဘီရှီအန်းဒရွိုက်ကား DVD,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > မစ်ဆူဘီရှီအန်းဒရွိုက်ကား DVD
မစ်ဆူဘီရှီအန်းဒရွိုက်ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မစ်ဆူဘီရှီအန်းဒရွိုက်ကား DVD, မစ်ဆူဘီရှီအန်းဒရွိုက် 4.2 ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, မစ်ဆူဘီရှီအန်းဒရွိုက် 5.1 ကား DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
L200 2007-2014 များအတွက် Android ကား DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ASX 2012 အဘို့အကားရေဒီယိုဆက်စပ်ပစ္စည်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အဆင့်မြင့် Triton android9ကားရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Xpander အတွက် Android 9.0 ကားစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PX5 android ရေဒီယို Mistsubishi Attrage Merage အတွက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
MITSUBISHI Triton L200 အတွက် Android ကားစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Mitsubishi ASX အတွက် Android9ကား DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Lancer 2015 အတွက်နှစ်ဆ din မျက်နှာပြင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Outlander 2014 မှာ Android 9.0 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ system ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ASX 2010-2012 ဘို့ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ system ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Outlander 2006-2012 များအတွက် Android မှာဦးခေါင်းယူနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Lancer 2012 မှာ Android ကားရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Outlander 2014 ကားတစ်စီးကို double din DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ASX 2010-2012 များအတွက် Klyde အန်းဒရွိုက် bilstereo Navigation  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Lancer 2015 Klyde Android ကိုမာလ်တီမီဒီယာ bilstereo  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Pajero 2006-2012 များအတွက် AUTORADIO GPS စနစ်မာလ်တီမီဒီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ASX 2010-2012 များအတွက် Android ကို Bilstereo မာလ်တီမီဒီယာအညွှန်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Lancer 2006-2012 များအတွက် Android ကို bilstereo Navigation  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Lancer 2014-2015 များအတွက် Android အတွက်မာလ်တီမီဒီယာ bilstereo  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Outlander 2006-2012 များအတွက် Bilstereo မာလ်တီမီဒီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Outlander 2014 deckless ဘို့မော်တော်ကား DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
L200 2007-2014 များအတွက် Android ကား DVD
L200 2007-2014 များအတွက် Android ကား DVD Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM - Samsung 4GB...
ASX 2012 အဘို့အကားရေဒီယိုဆက်စပ်ပစ္စည်း
2012 - 2012 ASX များအတွက်ကားရေဒီယိုဆက်စပ်ပစ္စည်း ASX 2010 - 2012 အတွက်ကားရေဒီယိုဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထောက်ပံ့သည်။ ရေဒီယိုစခန်းများအမည်ပြောင်းထားသော RDS FM / AM ရေဒီယို၊ ရုပ်ပုံ၊ ဓာတ်ပုံ၊ အိပ်စက်ခြင်း၊ ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုး၊ Touch...
အဆင့်မြင့် Triton android9ကားရေဒီယို
Xpander အတွက် Android 9.0 ကားစတီရီယို
PX5 android ရေဒီယို Mistsubishi Attrage Merage အတွက်
MITSUBISHI Triton L200 အတွက် Android ကားစတီရီယို
Mitsubishi ASX အတွက် Android9ကား DVD
Lancer 2015 အတွက်နှစ်ဆ din မျက်နှာပြင်
Lancer 2015 အတွက်နှစ်ဆ din မျက်နှာပြင် ကား၏ရေဒီယိုသည်သင်၏ Lancer android ကားစတီရီယိုခေါင်းစီးတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။ ရွေးချယ်နိုင်သောကိရိယာများ - 3G / 4G dongle ကိုသုံးပါသို့မဟုတ်ကွန်ယက်ရရန်အတွက် Hot-spot မျှဝေပါ၊ Front USB DVR Dash Cam,...
Outlander 2014 မှာ Android 9.0 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ system ကို
Outlander 2014 မှာ Android 9.0 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ system ကို သင့်ကားများအတွက် 1.Perfect Fit: ဒီယူနစ်ချုပ်ယင်းအကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးကြည့်ဖို့ဖန်ဆင်းထားသည် fit နှင့်ဒီဇိုင်းမှသင်၏ car.Everything နှင့်အတူဿုံအလုပ်မလုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်ကြည့်နေသည်။...
ASX 2010-2012 ဘို့ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ system ကို
ASX 2010-2012 ဘို့ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ system ကို နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 operating system ကို,4+ 32G မှတ်ဉာဏ်, Octa-Core CPU, အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ကြိုက်ရေဒီယို RDS နှင့်အတူ ASX အဘို့ဤယူနစ်ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာစနစ်။4* 50w...
Outlander 2006-2012 များအတွက် Android မှာဦးခေါင်းယူနစ်
Outlander 2006-2012 များအတွက် Android မှာဦးခေါင်းယူနစ် ဤသည်ယူနစ် Outlander များအတွက် Android မှာဦးခေါင်းယူနစ်နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 operating system ကို,4+ 32G မှတ်ဉာဏ်, Octa-Core CPU, အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ကြိုက်ရေဒီယို RDS အတူ။4* 50w...
Lancer 2012 မှာ Android ကားရေဒီယို
Lancer 2012 မှာ Android ကားရေဒီယို ဤသည်ယူနစ် Lancer များအတွက် Android မှာကားရေဒီယိုနောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 operating system ကို,4+ 32G မှတ်ဉာဏ်, Octa-Core CPU, အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ကြိုက်ရေဒီယို RDS အတူ။4* 50w...
Outlander 2014 ကားတစ်စီးကို double din DVD player
Outlander 2014 ကားတစ်စီးကို double din DVD player ကျနော်တို့ Outlander 2014 ဘို့ငါတို့နှစ်ဆ din တှငျအဘယျရှိသနည်း Outlander 2014 အဘို့ဤယူနစ်ကို double din အတူ 1. ကိုသင် BT တို့ကအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ ပထမတော့သငျသညျ, iPhone,...
ASX 2010-2012 များအတွက် Klyde အန်းဒရွိုက် bilstereo Navigation
ASX 2010-2012 များအတွက် Klyde အန်းဒရွိုက် bilstereo Navigation ထိုကဲ့သို့သောရုရှား, တူရကီ, GCC နိုင်ငံများအဖြစ်နိုင်ငံအများအပြား, စတာတွေအတွက်အလွန်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်တရုတ်အတွက်ဦးဆောင်အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအဖြစ်, Klyde...
Lancer 2015 Klyde Android ကိုမာလ်တီမီဒီယာ bilstereo
Lancer 2015 Klyde Android ကိုမာလ်တီမီဒီယာ bilstereo ထိုကဲ့သို့သောရုရှား, တူရကီ, GCC နိုင်ငံများအဖြစ်နိုင်ငံအများအပြား, စတာတွေအတွက်အလွန်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်တရုတ်အတွက်ဦးဆောင်အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအဖြစ်, Klyde ဤတွင်ကျနော်တို့...
Pajero 2006-2012 များအတွက် AUTORADIO GPS စနစ်မာလ်တီမီဒီယာ
Pajero 2006-2012 များအတွက် Android မှာ 8.0 PX5 AUTORADIO GPS စနစ်မာလ်တီမီဒီယာ အဆိုပါနောက်ဆုံးပေါ် Android မှာ 8.0 OS ကို apps များ 4GB RAM ကိုအတူကိရိယာများပေါ်တွင်ထိထိရောက်ရောက် run...
ASX 2010-2012 များအတွက် Android ကို Bilstereo မာလ်တီမီဒီယာအညွှန်း
ASX 2010-2012 များအတွက် Android မှာ 8.0 PX5 အန်းဒရွိုက် Bilstereo မာလ်တီမီဒီယာအညွှန်း အန်းဒရွိုက် 8.0 Oreo, CPU ကို: Octa-Core, 4GB RAM ကို & 32GB ROM ကို, အရည်အသွေးမြင့်ရေဒီယို IC: NXP TEF6686, ကောင်းသောရေဒီယိုဧည့်ခံခဲ့သည်။ Key ကိုအင်္ဂါရပ်များ...
Lancer 2006-2012 များအတွက် Android ကို bilstereo Navigation
Lancer 2006-2012 များအတွက် Android မှာ 8.0 PX5 အန်းဒရွိုက် bilstereo Navigation အဆိုပါနောက်ဆုံးပေါ် Android မှာ 8.0 OS ကို apps များ 4GB RAM ကိုအတူကိရိယာများပေါ်တွင်ထိထိရောက်ရောက် run...
Lancer 2014-2015 များအတွက် Android အတွက်မာလ်တီမီဒီယာ bilstereo
Lancer 2014-2015 များအတွက် Android မှာ 8.0 PX5 Android ကိုမာလ်တီမီဒီယာ bilstereo အန်းဒရွိုက် 8.0 Oreo, CPU ကို: Octa-Core, 4GB RAM ကို & 32GB ROM ကို, အရည်အသွေးမြင့်ရေဒီယို IC: NXP TEF6686, ကောင်းသောရေဒီယိုဧည့်ခံခဲ့သည်။ Key ကိုအင်္ဂါရပ်များ 1)...
Outlander 2006-2012 များအတွက် Bilstereo မာလ်တီမီဒီယာ
Outlander 2006-2012 များအတွက် Android မှာ 8.0 PX5 Bilstereo မာလ်တီမီဒီယာ 1. အဆိုပါနောက်ဆုံးပေါ် Android မှာ 8.0 OS ကို apps များ 4GB RAM ကိုအတူကိရိယာများပေါ်တွင်ထိထိရောက်ရောက် run...
Outlander 2014 deckless ဘို့မော်တော်ကား DVD player
Outlander 2014 deckless များအတွက် Android မှာ 8.0 PX5 မော်တော်ကား DVD player 1. ဤအကြောင်းအရာအားယင်းချိတ်ဆက် DTV Box ကိုအပေါ်ပါဝါနိုင်ပါတယ်။ built-in DAB + စနစ်ပဲဒီ function ကိုသုံးစွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DAB + Box ကိုနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ။ built-in DVR...
တရုတ်နိုင်ငံ မစ်ဆူဘီရှီအန်းဒရွိုက်ကား DVD ပေးသွင်း
1.Mitsubishi အန်းဒရွိုက်ကား DVD, ဒီစီးရီးအများအပြားမော်ဒယ်များရှိသည်, မစ်ဆူဘီရှီ၏ကွဲပြားခြားနားသောကားကို fit နိုင်ပါတယ်။ မစ်ဆူဘီရှီအန်းဒရွိုက်ကား DVD (မာလ်တီမီဒီယာမော်တော်ကား DVD), ဤသည်ကားကို DVD GPS များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားသည် CPU Octa-core Rockchip PX5 Cortex A9 ဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ 12 လအတွင်းအာမခံပေး, ပိုပြီးအစွမ်းထက်နှင့်ပိုပြီးတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
2.Mitsubishi အန်းဒရွိုက်ကား DVD, လွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်ကိုပံ့ပိုး: android စမတ်ဖုန်းနှင့် devices များနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, အလွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများနှင့်ကားကိုဦးခေါင်း uni အကြားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာလိုအပ်သည့်အပိုမရှိဆော့ဗ်ဝဲနဲ့, ကို USB မှတဆင့် uni ရန်သင့်စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
3.Mitsubishi အန်းဒရွိုက်ကား DVD 2006-2012 / ASX 2010-2012 / Pajero 2014-2015 / Lancer 2014 / Outlander Outlander 2015 / Outlander များအတွက် 2006-2012 -seven မော်ဒယ်များ 2006-2012 / Lancer ကိုက်ညီယခုငါတို့သည်လည်းပိုပြီးမော်ဒယ်များအပေါ်ဖွံ့ဖြိုးပါလိမ့်မယ် ။
မစ်ဆူဘီရှီအန်းဒရွိုက်ကား DVD မစ်ဆူဘီရှီအန်းဒရွိုက် 4.2 ကား DVD မစ်ဆူဘီရှီအန်းဒရွိုက် 5.1 ကား DVD